Sida loo abuuro farriimaha soo dhaweynta ee kooxaha Telegram | Androidsis
Sida loo abuuro farriimaha soo dhaweynta ee kooxaha Telegram (Tababbarka fiidiyowga ee la taaban karo)
Androids aad u wanaagsan iyo gaar ahaan dadka isticmaala Telegram, iyo casharkaan cusub ee fiidiyowga ah ee wax ku baranaya waxaan ku barayaa sida loo ku abuuri fariimaha soo dhaweynta kooxaha Telegram si aad iyo aad u fudud. (Dhammaan farriimaha soo dhaweynta tooska ah iyo farriimaha macsalaameynta).
Waxaan go'aansaday inaan abuuro casharradan fiidiyowga ah ee wax ku oolka ah codsiyada laga helo Telegram, faallooyinka YouTube iyo shabakadaha kale ee bulshada taas oo isticmaaleyaal badani ay si xoog leh iiga codsadeen inaan sameeyo casharro lagu soo dhaweynayo isticmaaleyaasha cusub ee ku biiraya koox Telegram.
1 Sida loo abuuro farriimaha soo dhaweynta ee Telegram talaabo talaabo ah (Iyo sagootin)
2 Ka soo degso Telegram rasmi ah Google Play Store
3 Ka dagso Telegram X Google Play Store
4 Ka Daji Plus Messenger-ka Google Play Store
5 Bgram kala soo deg Google Play Store
Sida loo abuuro farriimaha soo dhaweynta ee Telegram talaabo talaabo ah (Iyo sagootin)
Nidaamku waa mid fudud sida kudar tan: Soo dhaweyn Bot ka maamul ahaan kooxdeena ama kooxaheena . Kaliya nuqul magacan @ jh0ker_welcomebot oo ku dar hal isticmaale oo dheeraad ah kooxdaada.
Kadib waxaad aadeysaa xulashada xubnaha kooxda hoos u dhig Botka Soo Dhoweynta kuna dar maamulkiisa.
Marka tan la sameeyo, Waxay ku filnaan doontaa oo keliya in la siiyo rukhsadda maamulka si ay u tirtirto farriimaha oo loogu martiqaado xiriiriye. Labadan rukhsad, bot wuxuu diyaar u noqon doonaa inuu bilaabo shaqadiisa.
Mar alla markii aan soo galo kooxdeena oo aan ku dhajiyo Botka Soodhawaynta ee durba loo meeleeyay maamuleheeda, waxa kaliya ee kuu hadhi doona waa ku hagaaji fariinta soo dhaweynta iyo fariinta macsalaameynta ah / amarada soo dhaweynta iyo / nabadgelyada.
Waa inaad tixgelisaa taas waa inaad ixtiraamtaa isku xidhka amarka Sida ay noogu sheegeyso goorta aan bilaabeyno Dhabta Soo Dhaweynta markii ugu horeysay.
Amarka / soo dhawow oo lagu daray fariinta aan rabno kuna dar $ username Waxaan shakhsiyan u soo dhawaynaynaa xubnaha cusub anaga oo ugu yeerinayna magacyadooda.
Isla sidaas ayaa ku dhici doonta amarka / nabad gelyo oo lagu daray fariin macsalaameyn ah oo lagu daray $ username.
Shaashadda aan kaaga tagay wax yar korka waxaad ku arki kartaa liiska amarada bot oo dhameystiran, bot aad u fudud, aad u fudud in la isticmaalo iyo xalka aad u wanaagsan ee adeegsadayaasha aan rabin dhibaatooyinka waaweyn ee soo dhaweynta ama sagootinta ah xubnaha cusub ee kooxaha on Telegram.
Ma fududaan karto. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso fiidiyowga ku lifaaqan ee aan uga tegey bilowga qoraalkan, fiidiyow lagu duubay qaab toos ah si aad uga dhex aragto moobilkaaga shaashad buuxda oo aad u aragto waxa aan samee sida aan sameeyo.
Ka soo degso Telegram rasmi ah Google Play Store
Ka dagso Telegram X Google Play Store
Ka Daji Plus Messenger-ka Google Play Store
Bgram kala soo deg Google Play Store
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo abuuro farriimaha soo dhaweynta ee kooxaha Telegram (Tababbarka fiidiyowga ee la taaban karo)
Jony Rendon dijo
Saaxiib, runtu waxay tahay, waxaan raacay casharka fiidiyowga laakiin ima siinayo sidaad u dhigto, waxaan bixiyaa amarrada laakiin farriinta ku socota kama muuqato
Ku jawaab Jony Rendón
Android 11 ayaa kuu oggolaan doonta inaad barnaamijka barnaamijka mugdiga ah
Redmi K30 5G wuxuu yeelan doonaa nooc kala duwan oo leh 12 GB RAM iyo 512 GB